Vista's Colorful Planet: နွဲ့ ရီ ( ၃ )
မပြီးသေးဘူးလားအေ နွဲ့ရီအဖြစ်ကလည်း ...အဟင့်
Fighting Nwe Yes..
Fighting partner Ju Ju ...:P
Part timer .. Sorry
I thought the Nwe ye (2) is the end of story. Ha ha..
Cool.. U didagood job...It makes u feel happy whenever u think about it.
ပြီးပါတော့မယ် အရမ်းများလို့ ဖြတ်လိုက်တာ .. ဟီး မမစင် ၊ တီမာ ရေ ကျေးဇူး ။ Ant ဆက်ရန်ရေးထားတာကို ညက်စိမှုန်နေပီ ထင်တယ် ။
အဝေးကြီးမှာ ရောက်နေပေမယ့် လိုအပ်လာတဲ့အခါ ‘စိတ်မကောင်းပါဘူး’ ဆိုတာလေး လောက်နဲ့တင် မပြီးဘဲ သူငယ်ချင်းအတွက် အပင်ပန်းခံပြီး ကြိုးစားပေးတဲ့ ဂျုဂျုရဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးကို နှစ်သက်စွာနဲ့ လေးစားမိတယ်...၊ ဆက်ရန်ကိုလည်း စိတ်ရှည်စွာနဲ့ စောင့်နေမယ် ညီမရေ...။
A kind-hearted person!
ဘစ်ဘစ်ရဲ့ဝတ္တုကသိပ်ကောင်းနေပြီ၊ဆက်မျော်နေပါသည်.. :)